हाईड्रोपवारमा पुन चहलपहल सुरु हुँदा शेयरबजारका महत्त्वपूर्ण विन्दुहरु के-के हुन ? « Nepal Bahas
हाईड्रोपवारमा पुन चहलपहल सुरु हुँदा शेयरबजारका महत्त्वपूर्ण विन्दुहरु के-के हुन ?
प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०७७, आईतवार १७:१५
१६ कार्तिक, काठमाडाैं । अघिल्लो कारोवार दिन जस्तै आज पनि शेयरबजारमा थोरै गिरावट देखिएको छ । नेप्से परिसूचक ४ दशमलव ७२ अंकले घट्दै १६४० दशमलव ९५ को विन्दुमा बन्द भएको छ ।
वाणिज्य बैंक उपसुचकमा १ प्रतिशत माथि गिरावट आउँदा समस्त नेप्से परिसूचकमा नै प्रेसर आएको छ। हाईड्रोपावर उपसुचकमा फेरी चमक आउँन सुरु भएको छ । ट्रेडिङ्ग उपसुचकमा सर्वाधिक वृद्धि हुँदा लघुवित्त उपसुचकमा पनि १ प्रतिशत माथिको वृद्धि देखिएको छ ।
यसै वर्षको मार्च महिनाको ईण्ट्राडे हाई विन्दुबाट नै अघिल्लो कारोवार दिन शेयरबजार फर्किएको थियो भने आज पनि खुला विन्दुलाई नै उच्च विन्दु बनाउदै आजको बजार तल्लो दिशातर्फ फर्किएको छ। वाणिज्य बैंकहरुमा बिक्री चाप आए संगै बजार घट्न पुगेको हो ।
बजारले १६१० को क्षेत्रको प्रतिरोध तोडेर माथिल्लो दिशा समातेकोमा बजारले तत्कालीन टेवा १६१० को क्षेत्र तिर पाउने सम्भावना अलिक धेरै छ। त्यसपछि भने बजारले १५५० को क्षेत्रमा एउटा बलियो टेवाको रुपमा अघि सर्ने छ।
बजारलाई बुलिस आकृति समाउनको लागि प्रतिरोध क्षेत्र अघिल्लो कारोवार दिनको उच्च विन्दु १६६०को क्षेत्र नै रहेको छ।
आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको सुपर मादी हाइड्रोपावरले इक्रा नेपालबाट पायो इक्राएनपी आईआर बीबी रेटिङ
सिटिजन्स बैंकको साढे १५ हजार कित्ता संस्थापक शेयर बिक्रीमा, मूल्य कति ?
नेप्सेमा दुई वाणिज्य बैंकसहित तीन कम्पनीको शेयरमूल्य समायोजन
आधा दर्जन लघुवित्तले आईपीओ निष्कासन गर्दै, कुनको कति ?